Public Health in Myanmar: Useful Health Facts for Kids
Useful Health Facts for Kids
ဒီပိုစ့်ကို မရေးခင် ဘလော့ကို လာလည်တဲ့ စာဖတ်သူတွေကို နှစ်သစ်ကူး ဆုမွန် တောင်းပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး အောင်မြင်မှုတွေ တစ်သီကြီး ရဖို့ မနဲ့မောင်က ဆုတောင်း ပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲ ကာလမှာ စာမရေးတာ ကြာသွားတော့ အမှန်တကယ် ၀န်ခံ ရရင် စာပြန်ရေးရမှာ တော်တော် အပျင်းထူ နေပါတယ်။ ရင်သွေးငယ်များ ကျန်းမာရေးလို့ ဆိုပေမယ့် အဓိက တင်ပြသွားမှာကတော့ အအေးမိ နှာစေး ချောင်းဆိုး ဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေကို မိဘ အုပ်ထိန်းသူတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လို ဂရုစိုက် ပြုစုကုသ ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ကလေး အဖျားတက်နေရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ
ကလေး ဆရာဝန်တွေ အလိုအရတော့ ကလေးရဲ့ ကိုယ်အပူချိန်ဟာ ၁၀၀.၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ရှိရင် ကိုယ်အပူချိန် တက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သာမန် ကိုယ်အပူချိန်ကတော့ ၉၈.၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ပါ။ သင့်ရင်သွေးငယ်ဟာ (က) အသက်လေးလအောက်ဖြစ်လျှင် (ခ) တခြား လက္ခဏာတွေ ရှိလျှင် (ဂ) အဖျားရက် ရှည်နေလျှင် ဆရာဝန်ထံ သွားရောက် ပြသပြီး ကုသမှု ခံယူရပါမယ်။
ကလေးငယ်တွေကို အဖျားကျဖို့ အိမ်သုံးဆေး အက်စပရင်ဖြင့် ကုသခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ အက်စပရင် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်တွေမှာ Reyeလို့ ခေါ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၂) အဖျားကျဖို့ တခြား ဘာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲ
ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေပတ်နဲ့ တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက ရေအေးကို မသုံးမိဖို့ပါပဲ။ တစ်ချို့ မိဘတွေက အေးလေ ကောင်းလေ ထင်ပြီး ရေခဲရေနဲ့ တိုက်ပေးတာ ကြားဖူးပါတယ်။ ရေနွေးလေး ရောပြီး ရေပတ် တိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကလေးငယ် မှာ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ တွေ့တယ် ဆိုရင်တော့ ဆေးခန်းကို အမြန်ပြေးပြီး ကုသမှု ခံယူရပါမယ်။ ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ငိုလျှင် မျက်ရည် မထွက်ခြင်း၊ လျှာနှင့် ခံတွင်း ခြောက်ကပ်နေခြင်း၊ ဆီးမပေါက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်နဲ့ အုပ်ထိန်းသူများ အနေနဲ့ ကလေးကို ၂ နာရီခြား တစ်ခါ နို့တိုက်ပေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဆရာဝန်ကို အိမ်ခေါ် ကုလေ့ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဆေးခန်းပြတာ များပါတယ်။ ကလေး အဖျားတက်တိုင်း သာမန်အားဖြင့် ဆေးခန်းပြကြတာ နည်းပါတယ်။ အိမ်သုံးဆေးဝါးနဲ့ ကုရင်ကု၊ မဟုတ်ရင် ရိုးရာ တိုင်းရင်ဆေး၊ ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုတတ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေ၊ လက္ခဏာတွေကို မိဘ အုပ်ထိန်းသူတွေ အနေနဲ့ သိရှိထားပြီး အမြဲ စောင့်ကြည့်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အဆိုပါ လက္ခဏာတွေကတော့ ရေဓာတ် ခန်းခြောက်သည့် လက္ခဏာ ရှိခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ အရေးပြားပေါ်တွင် အကွက်များ ပေါ်ခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ အစာလုံးဝ မစားတော့ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄)ကြက်စွပ်ပြုတ် သောက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိ နိုင်ပါသလား
တစ်ချို့ သုတေသန စာတမ်းတွေကတော့ ကြက်စွပ်ပြုတ်ဟာ ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာ ပျောက်ကင်း စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ အချက် မမှန်လျှင်တောင် ကြက်စွပ်ပြုတ်ဟာ ကလေးငယ် အတွက် အဟာရ ဖြစ်စေပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ ရှူစေပြီး နှာခေါင်းပိတ် သက်သာအောင် လုပ်နိုင်သလို ရင်ဘတ်ကို ပွတ်ပေးခြင်းဖြင့် အချွဲကြပ်တာ သက်သာစေပါတယ်။
(၅)လည်ချောင်းနာတာကို ဘယ်လို ကုသမလဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ လည်ချောင်းနာတာဟာ သာမန်အားဖြင့် အအေးမိတာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၄-၅ရက်ခန့် ကြာတတ်ပြီး အသက် (၂)နှစ် အထက် ကလေးတွေမှာတော့ ရေနွေးကို ပျားရည် အနည်းငယ် ရောပြီး တိုက်လျှင် သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ Strepsil ကဲ့သို့ ငုံဆေးများကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ စတရက်တို ကော့ကပ်စ် ပိုးကောင်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ လည်ချောင်းနာရောဂါကတော့ အအေးမိတာနဲ့ တွဲ ပြီး မလာတတ်ပါဘူး။ စတရက်တိုကော့ကပ်စ်လို့ သံသယ ရှိရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီ အမြန် သွားရောက် ပြီး ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ ပဍိဇီဝဆေးများဖြင့် ထိရောက်စွာ ကုသမှု မလုပ်ခဲ့ရင် နောင်မှာ နှလုံး အဆို့ရှင်တွေကို ထိခိုက် စေတတ်ပါတယ်။
(၆) အသက်အရွယ်နဲ့ အိမ်သုံးဆေး
အသက်(၄)နှစ်အောက် ကလေးတွေကို အိမ်သုံးဆေး(Over the counter) ဆရာဝန် လက်မှတ် မပါဘဲ ၀ယ်နိုင်သော ဆေးတွေ သုံးပြီး မိမိ သဘောနဲ့ မကုသ သင့်ပါဘူး။ အဆိုပါ ဆေးဝါးတွေဖြင့် ကုသခြင်းဖြင့် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးက ပိုများ စေပါတယ်။ ကလေးကို ရေများများ တိုက်ပေးခြင်း၊ ရေပတ်တိုက် ပေးခြင်း၊ ရေနွေးငွေ့ ရှူစေခြင်း စသည့် နည်းလမ်းများက ပိုမို ထိရောက် စေပါတယ်။
Posted by zinthu
Labels: Child health, Communicable disease
Ifapatient (child or adult) has high fever, can we pour cold water upon his body in order to reduce the body temperature? Sorry for Eng typing because this pc does not have zawgyi font.
I have to say * No*.Very cold water is not good for sponging.we should use warm water(not hot water).Thank for your question!
What did Bogyoke say about Public Health?
Events Unrelated to Public Health ???
Useful Health Facts for Children (2)